Miverina ny zaza !! Veloma ry Kubuntu, Salama Debian | Avy amin'ny Linux
Herinandro latsaka no naharitra tamiko Kubuntu amin'ny solosaina miasa ary ny zava-misy tsotra azo atao KDE 4.10 tsy manaloka ny fitoniana sy ny hafainganana nananany Debian KDE.
Nanomboka ny olana, na inona na inona antony nahazoako hafatra diso, ilay iray manan-tsafidy handefa tatitra any amin'ireo mpamorona ary miantso ny tenany. Apport. Hivoaka aho na inona na inona, vitao ny mijery horonantsary ary akatony Mpilalao dragona (ohatra), ary BOOM !!! ny hafatra kely .. ary toy izany koa ny fampiharana rehetra. Azo esorina ny hafatra, ho hitantsika ny fomba hanaovana azy amin'ny paositra hafa, fa ndao, rehefa maneno ny renirano ...
Tampoka teo dia nanjavona avy tao amin'ilay takelaka ireo fampandrenesana ary nankany amin'ny ilany havia ambony amin'ny efijery. Misy ny fampiharana tsy mandeha .. na izany aza. Ka na fohy na kamo tsy omaly no nitodihako Fitsapana i Debian.
Tsy hanome tsiny aho Kubuntu o KDETamin'ny voalohany satria tsy fantatro hoe iza amin'izy roa no tompon'andraikitra amin'ireo tranga ireo. Manameloka ny tenako aho tamin'ny fanaovana a PPA momba ny kinovan'ny Kubuntu izay voaporofo fa marin-toerana amin'ny solosaina hafa, miaraka amin'ny kinalan'ny KDE amin'izao fotoana izao.
Fa ny tena izy dia ny mody any amin'izay ahatsapako tsara .. ary ny Desktop-ko dia izao no jerena .. Ho an'ireo izay liana, ny lohahevitra Plasma ampiasako dia openSUSE ary ny ao ambadiky dia an'ny wallpaper an'ny Luna Elementary.
Amin'ny lafiny iray, KDE 4.10 voaporofo fa tena tsara endrika. Na dia Debian Tsy maintsy miandry ela aho vao afaka mampiasa azy, ho mendrika ny fiandrasana, koa, ity kinova ity (ny 4.8) tsy manao ratsy ..
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Miverina ny zaza !! Veloma ry Kubuntu, Salama Debian
Marco Lopez dia hoy izy:
Mahafinaritra, manokana, tiako ny debian, vaovao amin'ny linux aho, ary tsy haiko ny mametraka KDE na ny interface hafa, saingy averiko ihany, Debian tsara miaraka amin'ny KDE. arahabaina
Valiny tamin'i Marco López
Misaotra anao. Raha te hanandrana ianao dia afaka manampy anao ity: Debian Wheezy + KDE 4.8.x: Fametrahana sy fanaingoana..
Ao amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba fametrahana KDE kely kokoa na latsaka kely aho .. saingy manoro hevitra anao aho hametraka fotsiny ny meta-package: kde-feno ????
Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy apetrako ao amin'ny VBox fotsiny izy io, satria ny biosin'ny pc-ko dia tsy manohana linux INDRINDRA. Misaotra noho ny tut, ary manandrana azy, raha ny tena izy, ny rohin-tsarimihetsika? arahabaina indray 😀
Nahazo azy ireo aho Eto.
Ao amin'ny tranokala Debian dia tadiavo ny → "sary CD CD ISO" safidio ny ohatra fampidinana ohatra → "Sintomy ny sary CD / DVD Debian amin'ny alàlan'ny HTTP / FTP" safidio na CD na DVD. Izao ny sehatra i386 na amd64, ao anatin'ny iso misy, safidio → "debian-6.0.6-amd64-kde-CD-1.iso"
Manoro hevitra anao aho hampiasa sary nomanin'i Debian miaraka amin'ny KDE aorizinaly:
Debian 6-bit 32:
Debian 6-bit 64:
Debian 7-bit 32:
Debian 7-bit 64:
saturbo dia hoy izy:
Vao nanomboka tamin'ny fitsapana debain ny KDE aho, avy amin'ny PClinuxOS. Faly aho, vitako ny nanao ny zavatra rehetra niasa mora foana, izay nahafa-po ahy indrindra. Nampiasa linux nandritra ny taona vitsivitsy aho fa tsy manam-pahaizana. Mieritreritra aho fa hijanona miaraka amin'i Debian mandritra ny fotoana maharitra.
Ny hevitro voalohany! Miarahaba sy miarahaba ny bilaogy, mahafinaritra ny mamaky azy.
Mamaly an'i saturbotas
Misaotra nijanona ary naneho hevitra .. Faly aho fa nahita fahafaham-po manokana tamin'ny Debian .. 🙂
Eny tokoa, ny fahamarinan-toerana amin'ny Debian Testing (ampiana amin'ny kinova sasany amin'ireo rindrambaiko ankehitriny) dia mahatonga azy io ho safidy tsara indrindra, mampalahelo fa any aoriana lavitra any i KDE 🙁
Ary misaotra noho ny zavatra farany nolazainao haha
Efa fantatro fa tsy haharitra anao io 😀
Miandry ny hametraka PC-BSD fotsiny aho… hehehe
Manantena aho fa mendrika izany, nefa lazaiko aminao, amin'ny zava-misy iainanay ankehitriny .. hiverina any amin'ny Debian ianao afaka iray volana latsaka hahaha ..
Ho hitantsika ... azo atao, eny, fa ho hitantsika.
Amin'izao fotoana izao dia voatosika hianatra momba ny rafitra BSD aho ... ipfw, ampiasao zavatra hafa ankoatran'i Bash (na dia fantatro aza fa tsy hahalala azy aho haha), sns sns ... Te hianatra momba ny BSD aho, mahasarika ny saiko 🙂
FreeBSD miaraka amin'ny sehatry ny mpampiasa arakaraka ny ora iainantsika 😉
Safidy lehibe i PC-BSD, ary tsy fantatro izay toe-javatra iantsoan'izy ireo, fa ny PC-BSD dia mitovy amin'ny fomba fametrahana ny programa amin'ny windows:
Ny pbi dia mitondra ny zava-drehetra (fiankinan-doha) ary milanja bebe kokoa dia apetraho izy ireo ary dia izay.
Mametraka anaty lahatahiry manokana mihitsy aza izy ireo (heveriko fa / usr / Programs /)
Ary raha ny bash, mila mampiasa tcsh na sh na mametraka bash fotsiny ianao.
Mbola mampiasa FreeBSD aho 😛
Maninona ianao no tsy sahy manandrana an'i Debian GNU / kFreeBSD ary milaza aminay ny fandehany? [mitsiky mahatsiravina]
Ho an'ilay ampahany milaza hoe "Debian" ...
(mihazakazaka manasa tanana!)
Ianao koa dia manana an'ity tahiry ity hanana kinde vao haingana kokoa (tsy 4.10 fa 4.9.5)
Mampalahelo fa rehefa nanandrana nampiasa azy aho dia nanana adim-piainana be loatra .. 🙁
Miverina ny zaza !! Veloma ry Kubuntu, Salama Debian >>> mitranga amin'i elav ity.
Miverina ny zaza !! Veloma ry Debian, Salama Fedora >>> Izany no mitranga amiko.
Miverina ny zaza !! Veloma ry Debian, Salama Fedora >>> Mitranga amin'ny Garbage_Killer izany.
Miverina ny zaza !! Veloma ry Fedora, Salama Arch >>> Mitranga amiko ity…. XD !!!
Ayosinho dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara. Efa nametraka an'i Debian in-droa aho, saingy nony farany dia nesoriko, satria tsy haiko ny mampifandray amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny wi-fi. Raha misy miteny amiko ny fomba hanaovana izany ...
Valiny tamin'i Ayosinho
Fa ny olana dia tsy hainao ny mampiasa Wi-Fi sa tsy hifandray i Debian?
Izay, tsy haiko ny mampiasa Wi-Fi, tsy haiko ny mampifandray azy, izany no nanesorako azy, satria manelingelina ahy ny mifandray amin'ny tariby, arahaba.
Mamaly an'i ayosinho
Andao hojerena. Raha ny fizarana (amin'ity tranga ity Debian) dia efa manana ny firmware mifandraika amina miaraka amin'ny fitaovanao Wi-Fi dia tsy maintsy ajanonao fotsiny na hofoanana izany amin'ny alàlan'ny NetworkManager na Wicd. Tsotra toy izany.
Ok misaotra. Rehefa mametraka an'i Debian indray aho dia hanandrana NetworkManager. Ary zavatra iray hafa, fantatrao ve ny fotoana hivoahan'ny Debian 7?
Raha mandeha tsara ny zava-drehetra (ary antenaina fa ho toy izany), amin'ny volana martsa ..
Tena mieritreritra aho fa haharitra iray volana na roa farafaharatsiny ary hanandrana zavatra hafa ianao ..., tsara xd
Tsia, tsia. Raha ny marina, talohan'ny nametrahana ny Kubuntu dia napetrako tao amin'ny KDE i Debian nandritra ny volana maromaro .. na dia tsy fantatrao 😀 aza izany
Volana maromaro ... Antsoina hoe tsy fivadihana marary izany.
Ny marina dia heveriko fa haharitra kokoa, Debian dia manana zavatra mitazona ny olona ela kokoa, talohan'ny nifindrako tany Ubuntu indray (mba hanana akorandriaka Gnome vao haingana), naharitra 8 volana tao amin'ny Debian Testing aho, ary azoko antoka fa Hiverina any amin'ny Debian aho raha vantany vao tsy feno ny sampana ary manomboka manavao ireo kinova rindrambaiko indray izy ireo.
Nampiasa an'i Debian foana aho .. Manandrana zavatra hafa foana aho ary miverina .. foana 😀
Gaga aho fa efa nidera an'i Kubuntu hatry ny ela ianao, saingy tsy nilaza na inona na inona aho satria azoko antoka fa fahitana vetivety izany ary vetivety dia hiverina ianao any an-trano, hahaha.
Hmmmmm, nanandrana kely an'i Debian aho, farafaharatsiny tamin'ny milina virtoaly, saingy tsy dia nanintona ahy izany. Marina fa manana fitoniana sy fanjifana harena ambany izy io, saingy hahatsapa lavaka lehibe rehefa mampiasa apt-get fa tsy pacman ho mpitantana fonosana. Ankoatry ny famotsorana teboka goavambe. Ny marina dia hanome azy fotoana hafa aho, satria nanana birao Xfce tena ratsy tarehy aho (mazava ho azy talohan'ny fanamboarana azy) na dia tadidiko aza angamba ny andro taloha niaraka tamin'ny Ubuntu Xfce, miaraka amina tabilao etsy ambany sy fanao tsara 26 px ambony etsy ambony ary gradient manokana natao tao amin'ny GIMP. Ahhh, firy ireo. Amin'ny lafiny iray, mahatsiaro ho tsy misy dikany aho amin'ny fampiasana Archlinux maoderina miaraka amin'ny KDE, ary nanary tampoka ny totozy malalako ka nahafaly ahy tokoa.
Eny, toa mampihomehy izany, saingy mitranga izany.
Taiza no nahazoanao ny lohahevitra momba ny plasma? Tsy hitako io
Namana iray izay nampiasa ahy no nandefa ahy openSUSE.. Azonao sintonina avy amin'ity rohy ity.
Ok misaotra 😀
Arahabaina elav, fanapahan-kevitra tsara.
Jereo eto fa hitanao ireo bibikely sisa hamoahana wheezy.
Ny sasany amin'ireo Bugs dia toa hadalana amiko .. fa na izany aza .. Misaotra amin'ny tendrony 🙂
Raha izany no antenaiko fa ho voavaha haingana izy ireo.
Fanontaniana elav, amin'ny PC miaraka amin'ny Intel Pentium G620 2.6 Mhz processeur dual core miaraka amina 2 GB Ram dia handeha tsara ve i Wheezy + KDE?
Uff, ianao sisa no mijanona .. 😀
Inona avy ireo sary masina ampiasainao? Mahaliana tokoa ireo.
Manao ahoana ny olona !!!!, avy any Buenos Aires maneho hevitra momba ny zavatra niainako niaraka tamin'ny KDE 4.10.
Ao amin'ny Kubuntu 12.10. Mahazo lesoka aho na aiza na aiza, misy ny rindranasa tsy mandeha, miseho ny fambara tatitra diso kely, ny fanidiana, ny fivoahana, ny loza. Ny kinova teo aloha dia 4.98 izay niasa tamin'ny 10 !!!. Moa ve misy mahalala miverina amin'ny kinova taloha na manavao ny ankehitriny, izay tsy miaraka amina fiaviana velively.
Misaotra anao mamihina !!!, Osky
Ny fiverenana dia tsy haiko, satria raha mampiasa Backport PPA ianao, dia miahiahy mafy aho fa hiverina amin'ny dingana iray izy ireo 😀
Misaotra mamaly. Jereo, mampiasa ny Backport PPA aho. Raha tsy misy ny miverina ahoana no hamahanao ny olana amin'ny fahazoanao. Misaotra tamin'ny fiaraha-miasa.
Saingy, indrisy amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mieritreritra vahaolana aho .. Satria mety hisy ny fihenam-bidy raha toa ka nanana ireo fonosana taloha ianao tao anaty cache apt, nefa tsy dia mahafapo 100% izany .. ankoatry ny manahirana. Misaotra anao tonga soa.
Mampiasà Kubuntu 12.10 64 bits aho, inona no mitranga fa ao amin'ny birao aho izao !!!!. Ny consultation dia tokony hametraka indray ny zava-drehetra !!!!
Heveriko fa ny fanesorana ny ppa, ny uninstalled kubuntu-desktop (heveriko fa izany no niantsoana azy) ary avereno apetraka izany amin'ny alàlan'ilay iray azo alaina ao amin'ny repos.
Eny, fa hiverina any amin'ny KDE 4.8 aho na zavatra hafa toa izany ... ary tsy haiko raha hiverina any amin'ny KDE 4.9 ny zavatra tadiavinao.
mampiasa ppa purge fotsiny….
Hiezaka aho ... Misaotra
Ramon Luis dia hoy izy:
Tena mora IzyO27: andramo ny mametraka Chakra 2013.02 «Benz», traikefa madio sy malefaka KDE, farafaharatsiny ho ahy dia efa ary distro tena milamina
Valiny tamin'i Ramón Luis
Gara_PM dia hoy izy:
Distro miaraka amin'ny kde tena tiako dia chakra, ankoatry ny fananana programa marobe na amin'ny pacman na ccr dia mitazona azy ireo manavao sy tsy mamoy ny fitoniana ao amin'ny rafitra. Ianao koa dia manana sambo (RAD amin'ny linux) izay ampiasaiko izao.
Raha ny fanazavana, tena tsara ny bilaogy, avy any Chile.
Valio ny Gara_PM
PC-BSD sy ny drafitra ho avy. dia hoy izy:
PC-BSD, ny kinova desktop an'ny FreeBSD, dia ho lasa "rolling distro" amin'ity taona 2013 ity (apetrako amin'ny teny nalaina, satria tsy fitsinjarana araka ny tokony ho izy, araka ny ahalalantsika azy ireo amin'ny tontolon'ny Linux).
Omaly alina aho nametraka ilay lahatsoratra tao amin'ny kaontiko G +, saingy mbola haneho hevitra momba azy aho izao sy eto, ho an'ireo izay natory, ary ho an'ireo izay manana olana amin'ny anglisy:
Eo i Kris dia miteny amintsika fa, noho ny rafitra parcel pkgng vaovao, ny rafitra parcel PBI amin'izao fotoana izao dia hipaka amin'ny pkgng. Ankoatr'izany dia hanao toy izany koa amin'ny haavon'ny rafitra miasa, amin'ny fampiasana ny "freebsd-update" utility hikirakirana ny fanavaozana ny rafitra amin'ny ambaratonga mimari-droa, fa koa ho an'ny -RELEASE, -STABLE ary -CURRENT.
Tsy mijanona eo ny olana, tsia. Ny fitaovana rehetra an'ny PC-BSD; ny mpanampy, ny script, sns, dia ho hita ao amin'ny port FreeBSD. Midika izany fa azonao atao koa ny mametraka FreeBSD, ary ao anatin'ny fotoana fohy dia manana birao miorina amin'ny PC-BSD vonona.
Noho ireo fiovana rehetra ireo dia ho tratra fa, ohatra, rehefa misy kinova vaovao an'ny KDE hita ao amin'ny seranan-tsambo dia ho hita eo noho eo. Raha misy fanavaozana ny kinova apache noho ny fanamboarana bibikely dia ho hita eo no ho eo sns ... Ary koa, tsy vitan'ny hoe hanana rafitra PC-BSD / FreeBSD ao amin'ny sampana -RELEASE ianao, afaka manana azy ao -STABLE ihany koa fa tsy mila manavao ny kaody sy mamerina ny rafitra !!
Izany rehetra izany, ny marina, dia nametraka ahy halina toy ny moto. Toy ny matory sy mihantona mandritra ny fotoana kelikely, satria tsy afaka najanoko ny sary an-tsaina ny mety ...
Ity taona 2013 ity dia tena ho taona mahaliana tokoa ho an'ny tontolo FreeBSD / PC-BSD 😉
Valio ny PC-BSD sy ny drafitra ho avy.
PC-BSD minono fotsiny.
Ny fananana birao BSD tsara indrindra araka izay mahazatra dia ny fametrahana FreeBSD (na ArchBSD rehefa vonona) ary ampio izay tadiavintsika.
Ary zavatra iray: ny FreeBSD _dia famotsoran-keloka_, raha ny marina dia saripika azo antoka fa izany, sary fohy fotoana fohy ao amin'ny hazo fampandrosoana. FreeBSD dia azo apetraka indray mandeha ary havaozina tsy mila fanavaozana mahatsiravina isaky ny 6 na 8 volana na isaky ny 2, 3, 5 na 7 taona 😛
Lazaiko aminao fa efa am-bolana maro aho no nampiasa Kubuntu, ny kinova izay nanary ahy diso tamin'ny voalohany dia 12.04, fa ny tapa-bolana voalohany fotsiny, taorian'izay tsy nisy. Amin'izao fotoana izao aho dia mampiasa ny dikanteny 12.10 miaraka amin'ny KDE 4.10 ary mino ahy ianao, tsy nisy hadisoana tokana nataoko tamin'ireo fampiharana, eny fa na dia amin'ireo rindranasa ampiasako amin'ny Crossover (SPSS) aza, kely kokoa amin'ireo zanatany. Ankoatry ny fampiasako ny Bespin, lohahevitra iray izay tsy vita tanteraka, ary tsy nanana olana aho dia heveriko fa tsara vintana aho.
Ahoana raha, manana Kernel 3.7 napetraka aho, satria noho ny antony tsy fantatra, Kernel 3.5 amin'ny solosaina findainy dia nanome ahy olana maro, hany ka namerina namerina ilay rafitra mihoatra ny in-1 aho, nieritreritra aho fa olana Kubuntu izany ary nametraka hafa fizarana izay nifanandrify tamin'ny Kernel 3.5 ary nahazo izany olana izany aho. Amin'ity Kernel ity dia sarotra ny manomboka ny solosaina findainy, satria tsy maty tanteraka izy io ary rehefa manomboka indray dia mameno ny Grub ary avy eo dia foana ny efijery ary avy eo dia tsy mitranga izany, raha tsy aorian'ny fanindriana ny bokotra 2 na 3 mamaly.
Rehefa avy nitady vahaolana tamin'ny Internet aho, ary satria tsy nahita na inona na inona (heveriko fa izaho irery no tranga tsy fahita matetika miaraka amin'ity lesoka ity) tamin'izany andro izany, navotsotra i Kernel 3.6 ary, diso fanantenana, nanapa-kevitra ny hametraka azy aho, hoy aho tamin'ny ny tenako; "Tsy mandeha tsara ny rafitra misy ahy, inona no olana, andao andramo izany" ary oh, tsy nampoiziko fa tsy nanana ny tsy fahombiazan'ny boot intsony aho, hatramin'izao, miaraka amin'i Kernel 3.7.6 Tsy mbola nanana olana kely akory aho, ny mandeha tsara sy milamina ny rafitra.
Noho ireo voalaza etsy ambony ireo, heveriko fa zavatra hafa no mitranga amintsika rehetra miaraka amin'ny distro (s) sasany; saingy heveriko fa mifanindran-dalana bebe kokoa amin'ny Hardwareantsika io fa tsy amin'ny fizarana mihitsy. Izany no hevitro manetry tena.
Ity misy pikantsary iray amin'ny birao:
Ny olana dia tsy manana afa-tsy ny repository an'ny Debian Testing sy Ubuntu 12.04 aho ... koa, tsy hametraka 12.10 aho mba tsy ho tohanana intsony noho ny akoho akoho 😀
Ahoana no fandehany, tsara daholo? Ho liana aho hahafantatra ny fomba fanavaozana ny bitika Kubuntu 12.10 64 amin'ny Kernel 3.7. Ho tsara fanahy ianao hanazava.
Misaotra anao avy any Buenos Aires, Arzantina. Osky
Salama Oai, Kernel 3.7.8 dia misy izao.
Eto amin'ity pejy ity dia asehon'izy ireo ny dingana fametrahana:
Raha vantany vao azonao antoka fa miasa tsara amin'ny Kernel vaovao ny fitaovanao sy ny rindranasao, dia mamporisika anao aho hamafa ny Kernel taloha, ao anatin'izany ny Headers, satria amiko, Google-Earth dia nanome ahy hadisoana (tsy nanomboka izany); fa namboariko tamin'ny famongorana ilay Header taloha.
Raha hijery ireo kernel napetraka:
sudo dpkg -l | sary linux grep
Raha hijery ireo lohateny napetraka:
Mba esory ny roa:
sudo apt-get esory –purge linux-image-XXX
sudo apt-get esory –purge inux-headers-XXX
Manantena aho fa hahasoa azy io.
Misaotra ny sosokevitra, apetrako amin'ny fampiharana ary ampahafantaro anao. Famihina avy amin'i Buenos Aires. Osky
Ka vitanao ve ny mihazakazaka SPSS amin'ny crossover? Mahaliana. Azoko fantarina ve hoe iza amin'ny SPSS?
Ireto ny rindranasa SPSS napetrako tao amin'ny Kubuntu 12.10:
Ireo dia miasa amin'ny Crossover 11.3.1 ary lazaiko aminao fa hatramin'izao dia mbola tsy nanana olana aho, rehefa miasa miaraka amin'ireo tahiry na fandaharana ao anaty ilay rindrambaiko. Fizarana 4.5 io, somary lany andro ihany; fa tena miasa amin'ny zavatra ataoko.
Ny zava-misy mahaliana dia ireo tsy mandeha amin'ny Windows 8, Win 7 sy XP ihany.
Tsara ny miverina amin'ny Debian, miaraka amin'ny ubuntu amin'ny ankapobeny dia tsy mifanaraka mihitsy aho raha tsy amin'ireo lts indraindray (sy ny sampana mpizara), fa ny tena izy, ao Debian, dia ireo fotoana no lasa manahirana, misy zavatra tadiavina betsaka ary ny iray zatra na mipoaka.
Miala amin'ny tranon'omby ianao ary miakatra ary miseho haingana kokoa ny raharaha, saingy mbola miadana izy na dia mihazakazaka haingana aza ireo fonosana (politika tsara hatrany ny fametahana ilay kaody). Ary avelan'ny olona ho somary manintona ihany koa ny olona, ​​afaka mahita ny sasany amin'ny Debian 4 ianao amin'ny famokarana.
Ao an-trano dia manana an'i Debian mihazakazaka amin'ny fitantanana rakitra + backup aho, izy io no mbola manjaka amin'ny solosainako, fa isan'andro isan'andro, mihetsika tsikelikely mankany Arch aho (izay mora kokoa ny fampidinana ary afaka milaza aho fa Mampiasà firaisankina, nefa tsy nametraka firaisankina tamina ubuntu prof) ary nanoratanao bsd (efa manana iray farafahakeliny aho, ny firewall ao an-trano).
Misaotra anao nijanona ary naneho hevitra .. Marina fa diso fanantenana isika indraindray manana zava-baovao, saingy amin'izao fotoana izao ny fitoniana sy (ny fahatsapana omena an'izany) izay ananako izao dia tsy manova azy na inona na inona aho .. mbola i KDE somary antitra raha oharina amin'ny distro hafa, fa ity kinova 4.8 ity dia miasa fahagagana ..
Tsara izany, debian dia misy zavatra mampihemotra anao. Manana fitsapana debian koa aho + KDE tsy dia nataoko manokana loatra izany, satria tiako ny vokatra KDE sy Oxygen.
izay ny latabatra misy ahy.
Toa tsara ny rivotra ao amin'ny KDE 4.10, saingy mbola tsy ampy kely ihany .. Ary, somary nahasarika ahy kokoa ilay tontonana miloko maizina .. fa hankafiziko 😀
tamin'ny farany dia navelako ihany koa ny openSUSE KDE izay heveriko fa distro tena tsara ary niverina tany amin'i Debian Wheezy aho. Ny fitoniana sy ny hakingana an'i Debian dia tsy azo ampitahaina amin'ny RHEL na CentOS ihany ary ireo dia manana fonosana somary "antitra". Toa lasa mivoatra amin'ny Debian ny iray ary manao izay tadiaviny dia manjaka amin'ny mpitantana izy ary sarotra ny miala amin'ny tanan'i Debian… Miverina foana aho .. Io no distro tsara indrindra :-) Avelako ianao PrtSc avy eo amin'ny latabatro ..
Miarahaba anao Debianeros 🙂
Ry malala @elav, tokony homena fotoana malalaka, fizarana, araka ny hevitro, ny OpenSUSE. Tamin'ny voalohany, mety ho somary mavesatra ho anao izany ary ekeko fa tsy ny tsara indrindra ny fanjifan'ny loharanom-pahalalana distro. Azo antoka izany fa io no fizarana kde matanjaka sy marin-toerana indrindra nampiasako (amporisihina aho hiteny mitovy amin'ny an'i Debian fa nohavaozina kokoa).
Na izany na tsy izany dia manoratra amin'ny Debian stable aho ary tamin'ny herinandro lasa teo dia nametraka Crunchbang Waldorf (mifototra amin'ny fitsapana debian) amin'ny solosaina asa aho, mihevitra ny tenako ho tsy maintsy ilaina nefa amin'ny andro andaozako ny Windows Seven ao amin'ny kahie, dia miaiky aho fa tsy noho ny antony nanesorana azy, azo antoka fa hametraka OpenSUSE kde aho. Ny repositories ny kinova farany an'ny kde dia miasa tsara ao amin'ity distro ity
Izy io dia TSY ny fizarana matanjaka indrindra na marim-pototra manomboka amin'ny fampidirana PACKAGEKIT mahantra azy izay manana olana folo alina, na ny vesatry ny Yast2 izay fampijaliana an-tsary ihany koa.
Ny KDE SC tsara indrindra dia ny Arch Linux 64-bit, vanim-potoana.
Miala tsiny fa tsy manaiky aho. Arch mety ho tsara indrindra ho anao, izay manana traikefa ampy hametrahana azy, mamaritra izany ary hamela izany araka ny fanirianao manokana. Ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa antonony (avelao ny olom-baovao), ny arch dia tsy ho safidy mety mihitsy, na inona na inona tontolon'ny birao voafidy, ho an'ny zava-misy tsotra fa tsy hahalala izy ireo / afaka hametraka azy io, miteny hoe "madio".
Mbola ao anatin'ny telo ambin'ny folo ambin'ny folo taona aho: ny KDE SC tsara indrindra amin'izao dia ny Chakra 2012.03, raha tsindrio ny OpenSuse.
Araka ny voalazanao, Andriamatoa tompon'ny fahamarinana tanteraka
HAAHAHA, nanaikitra maromaro ry zareo! xD
Mazava ho azy fa ny tsara indrindra _ ho ahy_ fa tsy misy mihoatra izany 🙂
Voarara ianao 😀
Rehefa avy nanandrana azy rehetra aho dia hoy aho ... ny fizarana xD rehetra dia nanatsoaka hevitra aho fa Kubuntu no distro tsara indrindra, satria niova ny kinova 12.04 ary araky ny zavatra niainako ny kinova farany an'ny kde dia mandeha tsara kokoa noho ilay iray ihany. tonga tampoka izany, indraindray ireo hafatra diso ireo dia mivoaka fa isaky ny mivoaka izy ireo dia izaho no diso, noho ny fanandramana ny zava-drehetra, distro mahafinaritra izany, apetrako amin'ny namako sy ny fianakaviako ary faly ny rehetra, nandeha tany Linux bebe kokoa aho na latsaky ny 15 ny olona ary izy rehetra aorian'ny 1 na 2 herinandro dia tsy te-hanomboka ny varavarankely intsony, manantena aho fa manohy ity làlana ity izao i kubuntu miaraka amin'ny bluesystem, bilaogy tena tsara fa ireo lesoka ireo dia tsy hivoaka noho ny fikasihan'izy ireo be loatra ny rafitra? fiarahabana xD
Ny olon-drehetra dia manana fahalalahana hampiasa ny distro izay safidiny, fa ny sasany amintsika kosa mirona amin'ny rafitra fiasa taloha toy ny Slackware sy Debian.
Atsaharo ny fanaovana tatitra tsy tapaka ao amin'ny Ubuntu 12.04